भेनेजुयला संकट र नेपालको प्रवृति,प्रचण्डको मदुरोलाई समर्थन | Sabaiko Online
Home Flash News भेनेजुयला संकट र नेपालको प्रवृति,प्रचण्डको मदुरोलाई समर्थन
भेनेजुयला संकट र नेपालको प्रवृति,प्रचण्डको मदुरोलाई समर्थन
काठमाडौं । गत जनवरी २५ मा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भेनेजुयला संकटको विषयमा विज्ञप्ति निकाल्दै भेनेजुयला संकटमा नेकपा राष्ट्रपति निकोलास मदुरोको पक्षमा रहेको बताएका थिए । उनको यो विज्ञप्ति अमेरिकाले विपक्षी नेता हुवाँ गुएइदोलाई राष्ट्रपतिको रुपमा स्वीकार गर्ने बताएसँगै प्रचण्डको तर्फबाट यस्तो विज्ञप्ति आएको थियो ।
उक्त विज्ञप्तिमा अमेरिकाले गरेको निर्णयको विरोध गर्दै मादुरो सरकारलाई साथ दिने उल्लेख थियो । गुएइदोले आफैं राष्ट्रपति भएको घोषणा गर्नु र अमेरिकालाई पनि त्यसलाई स्वीकार गर्नुले यो ग्राण्ड डिजाइनमा मादुरो सरकारलाई हटाउने चाल भएको उक्त विज्ञप्तिमा थियो । यस विषयमा ठूलो आलोचना भएसँगै सरकारले केही सन्तुलित किसिमको वक्तव्य निकालेको थियो । दुई तिहाइको बलसहित सरकारमा रहेको पार्टीका अध्यक्षले भेनेजुयलाको मादुरो सरकारको पक्षमा बोल्नुलाई निकै अर्थपूर्ण मान्न सकिन्छ । सरकारले आलोचना पछि त्यसलाई केही सच्याए पनि वास्तविक सोचाइ के हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
भेनेजुएला संकटमा मदुरो सरकारले राजधानी काराकासमा भैरहेको विरोध प्रदर्शनमा सेनाको ट्यांक प्रदर्शनकारीको भीडमा चढाइएको भिडियो सार्वजनिक भएको हो । मदुरो सरकार दमनमा क्रुर हुँदै गैरहेको भिडियोमा प्रष्ट देख्न सकिन्छ । यस्ता क्रूर शासनको पक्षमा नेपालको सत्तापक्ष हुनुलाई संवेदनशील बिषयका रुपमा हेरिनु पर्छ। नेकपा सरकारमा रहेको र क्रुरतालाई समर्थन गर्नु भनेको नेपालमा पनि भोलिका दिनमा यस्तै हुनसक्ने र विरोधलाई दबाउन कुनै पनि हदसम्म सरकार जान सक्ने तर्फ ईंगित गरेको छ।
के नेकपा क्रूरता र दमनको पक्षमा रहेको हो ? यसको जवाफ नेपाली जनतालाई अतिसिघ्र दिनु पर्ने हुन्छ । पछिल्लो सेनाको बर्रबरतामा नेकापा र नेपाल सरकार दुवै चुप बस्नुले नेपालमा पनि बहुमत र लोकतन्त्रको आडमा अधिनयाकवाद लाद्न सकिने र देशलाई पुन: एकपटक अँध्यारो तर्फ धकेल्ने संभावनालाई नकार्न सकिन्न।
के हो भेनेजुयलाको संकट ?
भेनेजुयलाको राजनीतिक संकट सन् २०१९ को शुरुवातबाट भएको थियो। अहिले भेनेजुयलाको राष्ट्रपति को हो भन्ने स्पष्ट छैन। २०१९ को शुरुवातमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक भएको थियो। जसमा निकालस मादुरो विजयी भएका थिए। यद्यपि उनीमाथि निर्वाचनमा गडबडी गरेका आरोप लागेको थियो।
निर्वाचनमा मदुरोको विपक्षमा हुवाँ गुएइदो थिए । यसै महिना उनी विपक्षका नेता बनेका छन्। यसअघिसम्म उनलाई विश्व समुदायका कसैले चिन्दैनथे। अहिले उनी आफैंलाई राष्ट्रपति बताइरहेका छन्। निर्वाचनको नतिजापछि मदुरोले कुसी छोड्न अस्वीकार गरेका छन्। यद्यपि गोइदो आगामी निर्वाचनसम्म अन्तरिम राष्ट्रपति बन्ने आफ्नो अधिकार रहेको बताउँदै आएका छन्।
गोएइदो यसअघि ह्युगो चाभेजको विद्धमा प्रदर्शन गर्ने नेता हुन्। चाभेजले मादुरोलाई आफ्नो उत्तराधिकारी चुनेका थिए। यद्यपि उनी चाभेजजस्तो लोकप्रिय भने हुन सकेनन्। चाभेजको विफल आर्थिक नीतिको कारण अहिले भेनेजुयला संकटमा रहेको हो।
यस्तोमा मुलुकको दूरावस्था हटाउन नसकेको भन्दै भेनेजुयलामा मदुरोको राजीनामाको माग गर्दै हजारौंको संख्यामा मानिसले प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । संकट समाधानको लागि अमेरिका तथा ईयूले पठाएको राहत पनि मदुराले सीमाक्षेत्रमा नै रोक्ने गरेका छन् ।